Ndị na-akersụ mmiri → → fo fo kers kers kers • • • • • • • •
Anyị na-enye ndị na-a waterụ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ maka agụmakwụkwọ, ụlọ ọrụ HoReCa, nlekọta ahụike, ụlọ, ọfịs, ebe ọha, ogige, ogige egwuregwu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ntụkwasị obi ịdị mma mmiri ọ drinkingụ .ụ bụ isiokwu nke mbọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta usoro pụrụ iche eji mmiri ịgwọ.
Mmiri ọ mustụ mustụ ga-enwerịrị onwe ya na microorganisms pathogenic na microelements na-emerụ ahụ ma kwesịrị inwe ezigbo uto.
Mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị mma ana achi achi anya nhazi, ihe eji eme ya na ihe eji abanye mmiri na mmiri n’ulo mmiri n’ulo ma obu ime obodo, ma na - ezere iju mmiri, nke anaghi agha gafere 25 Celsius.
Mmiri isi iyi
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịnye ọtụtụ ndị mmadụ ohere ịnweta mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, ọ bara uru ịtụle usoro ọhụụ na nke dị mma, dịka isi iyi mmiri mmiri.
Ndị dị otú ahụ na-a drinụ ihe ọ areụ areụ na-adị ọcha ma dị mfe iji rụọ ọrụ na-enye mmiri oyi ma ọ bụ ime ụlọ mmiri ma zuru oke maka oghere ọtụtụ mmadụ na-eji. Ejirila ihe ngwọta a ogologo oge na mba ndị ọzọ ma zuru oke maka ọfịs, ụlọ akwụkwọ, osisi ọrụ, ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ elu, i.e. ebe ọ bụla achọrọ ịnye mmiri ọ drinkingụ toụ maka ndị buru ibu nke ndị mmadụ.
Na njikọta ọrịa COVID-19, anyị na-eche etu esi, n’usoro ntuziaka nke Sanepid na iji lekọta ahụike nke ndị mmadụ, iji dozie nsogbu nke imeju akpịrị ịkpọ nkụ nke ndị mmadụ ịnọ n’obere obodo na ụlọ ọrụ ọha.
Lee kwa: Aka aka na ebe ikuku na Sistemụ na-etolite etolite na-eji mmiri apịtị apịtị
Mgbe anyị na-achọ ngwaọrụ dị mfe ma dị ọcha iji, ma ọkacha mma na-enweghị aka, ụlọ ọrụ na-emepụta ndị na-a drinụ mmiri na isi iyi mmiri ọ drinkingụ provideụ na-enye ihe ngwọta, nke a na-ahụ maka ịdị ọcha kachasị.
Mgbe ị na-ahọpụta isi iyi nke mmiri iyi agbanyeghị, enwere ụfọdụ ihe ị ga-arịba ama
Anyị ga-ewere, n'ezie, nke ahụ mmiri na-asọpụta site na akwa anyị ọ dị ezigbo mma, nke enwere ike kpebisie ike site na ịtụ iwu kwesịrị ekwesị ka a rụọ ya na ọdụ ịdị ọcha na nso nso. Ọ bụrụ na ọ na-egosi na anyị kpoo mmiri nwere ezigbo mma, enwere ike iji mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
ndị a ndị na-akersụ mmanya A makwaara dị ka ndị na-egwu mmiri, ọ bụ ngwaọrụ na-enye ohere iji mmiri dị ọcha ma dị mma na-enweghị efere. Mgbe ahụ, a na - enweta mmiri dị ọcha ma dị mma n'oge ọ bụla, n'ọtụtụ na maka mmadụ niile.
Spkingụ mmiri mmiri na-asọ asọ Enwere ike iji ha rụọ ọrụ nke ọma na ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ebe ọrụ, ọfịs na ebe ọhaneze niile, ebe ndị ahịa na ndị ọbịa, ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ na-achọkarị ime ka akpịrị ịkpọ nkụ ha.
Mgbe ị na-ahọrọ isi iyi mmiri ọ drinkingụ drinkingụ kwesịrị ekwesị, ị kwesịrị ị paya ntị ọ bụghị naanị ọdịdị nke ngwaọrụ ahụ, kamakwa ọrụ ya.
Ndị na-a drinụ mmanya na-akwụghị ụgwọ ga-arụ ọrụ ka mma n'otu ebe, na ndị kpọgidere ha n'ebe ọzọ. Mgbe ụfọdụ, mmiri mmiri anaghị adị mkpa. Untafọdụ isi iyi mmiri ọ drinkingụ areụ nwere arịa mgbakwunye ọzọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe jupụta dịka karama. Enwere ike iji bọtịnụ ụkwụ, bọtịnụ ma ọ bụ igwe foto rụọ ọrụ ndị nwere mmiri. Offọdụ n'ime ngwaọrụ ndị ahụ dabara adaba ihe nzacha mmiri.
Uru a na-ejighị n’aka nke isi iyi mmiri ọ isụ possibilityụ bụ ihe nwere ike ime ka ha jikọta ya na sistemụ mmiri na ojiji nke mmiri na-agba, nke na-eme ka nsogbu nke ị bottlesụ mmiri karama kpamkpam, ma ihe eji eme ya bụ ihe ọcha na ebe obibi, na-ejighị iko plastik.
A na-eji isi iyi mmanya eme ihe galvanized nchara, ntụ ntụ kpuchie na bọtịnụ ọla kọpa nickel.
Ejiri akwa corten ma ọ bụ nchara kpuchie ya na ihu ma ọ bụ azụ. Ejiri ígwè mee galọn ahụ.
Isi iyi mmiri na-arinụ mmiri na-enwetakwa akara ngosi akara laser omenala.
dịkọrọ ndụ ihe na-ewu ulo ha na-amanye ndị na-emepụta mmiri isi iyi ọ toụ toụ ka ha mejupụta atumatu dabara na ụdị a na-eme ugbu a na iji ihe ndị pụrụ iche na imewe ọgbara ọhụrụ na ngwaahịa ha. Ihe a na-enye na-etinye ma ngwaahịa na atụmatụ kpochapụwo yana ụdị minimalist.
A na-enyefe mmiri mmiri na-a spụ mmiri maka ebe ndị a na-egwu ntụrụndụ, ebe egwuregwu na ubi.
taa isi iyi nke ubi Ya mere, ha nwere ike rụọ ọrụ nke ọma ọ bụghị naanị ọrụ ịchọ mma, na-achọ oghere, mana ha nwekwara ike inye mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị elu.
Modelsfọdụ ụdị ndị na-akersụ mmanya emekwara anụmanụ.
Spụ mmiri na -eme ka mmiri na-enye aka na-elekọta gburugburu ebe obibi site na ibelata ego mkpofu mgbe ị na-a waterụ mmiri enweghị karama ma ọ bụ mgbe ị na-eji iko plastic.
Mmiri iyi a na-a drinkingụ mmiri a na-enye dị mma maka iji ya rụọ ọrụ n'ime ụlọ mechiri emechi yana n'èzí. Ejiri ngwaọrụ ndị kachasị mma rụọ ya ma rụọ ya na-enye ohere maka klọọkụụ, ịdị ọcha yana nke ọma.
Devicesfọdụ ngwaọrụ na-enye gị ohere inweta mmiri n ’ụlọ n’ ụlọ, oyi, na-egbu maramara. O bu ezigbo ihe nye ndi oru n’enwe ike inye ndi oru aka inweta mmiri o clean nu ocha.
Onye na - enye mmiri mmiri Pro-iyi. Mmiri oyi, mmiri na-ekpo ọkụ. Hụ nkọwa ndị ọzọ ebe a
Spụ mmiri ọ appeụaringụ na-apụta n’obodo mepere emepe na-enye ohere maka ịkwalite ibi ndụ ndụ ma zụlite iri nri dị mma, ọkachasị n’ihe banyere ịdị ọcha na ị frequentụ mmiri ọ cleanụ cleanụ dị ọcha.
Mmiri iyi dị mma, na-eguzogide mbibi ma dị mfe iji.
Enwere ike ị nweta ụfọdụ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na mpụga ikuku n'èzí afọ niile n'afọ site na iji valvụ mgbochi pụrụ iche.
Isi iyi a na-a drinkingụ mmiri ọgbara ọhụrụ - isi iyi ndị ahụ dị mfe iji nke na ụmụaka na ndị agadi nwere ike iji ha mee ihe n'ụzọ dị mfe, na-ekelekwa maka nhazi nke onye na-a drinkụ mmanya na ịdị elu nke onye na-eji ngwaọrụ ahụ.
ihe eji eme mmiriisi iyi ogigeihe owuwuma mmiri pọmpụ ahụ enwere ikema mmiri nke si na ya apụta dị mmanyo maka mmanyaisi iyi cascadeisi mmiriisi iyi ogigeọnụ ọnụ mmiri iyi ubiisi iyi nke umunnukwu isi mmiriubi isi-esi meenkume isi mmiriisi iyi obere ubiisi iyi ubi nke oge aisi iyi ubi abatala azụonye na emeputa ihe n’ubina-eru isi iyi nke ogigeisi iyi mgbidi ogigeisi mmiri nke ogigenkume isi mmirimmiri pọpụ maka onye na-a drinkụ mmanyaisi iyi obere ubindị na-a cityụ obodomepere emepe warsawmini isi iyiisi iyi ubi apitnikiolulu mmirindị na-akersụ mmanyandị na-akersụ mmanya maka ụmụakaakersụrụma maka ụmụaka n'ụlọ akwụkwọndị na-a drinụ mmanya maka ndị mmadụna-a forụ maka nkịtandị na-a drinụ mmanya maka ụlọ akwụkwọkpuchie ndị na-akersụ mmanyana-a inụ mmanya na ogigeinu mmanyaọkwụ pumpụ mgbapụtaisi iyi nke anyanwụMmiri nwere ike irummiri ọ drinkingụ drinkingụ mmirimmiri ọ inụ drinkingụ na Polandmmiri ọ warsụ warsụ warsawmmiri ọ drinkingụ requirementsụ chọrọmmiri si na mmirimmiri na-amachapụ n’aka onye na-a drinkụ yammiri na-asọpụtan'azụ mmiri pọmpụmmiri ọ spụ spụmmiriisi iyi nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụogbaagharana-enweta ubioge opupu ihe ubi na ụlọ akwụkwọmmiri na-asọpụtaisi iyi nke mmiri ọ drinkingụ .ụmmiri ọ drinkingụ springụ mmiri ọnụahịammiri na-a springụ mmiri n'ụlọ akwụkwọ
Hụ akụkọ ndị ọzọ: